Ndị ọrụ na-echegbu onwe ha maka Igwe Igwe Igwe Igwe - nke OMG
Ndị na - eme ọrụ na - echegbu onwe ha maka ojiji Igwefoto-Worn
Gburugburu US, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii anakwere igwefoto nwere eyi na-eme ka mmadụ nwekwuo ike ịza ajụjụ na nghọta. Ntughari na nkwanye ugwu a dum mere na agbanyeghị na ụfọdụ nguzogide nke o nwetara site n'aka ọtụtụ ndị uwe ojii n'okpuru ọtụtụ ikike, nguzogide nke a butere iyi egwu ọ bụla na mmejuputa igwefoto ahụ. Nguzogide a abụwo nnukwu ihe ndọghachi azụ na mmejuputa yana ịgbaso ụkpụrụ a so. Otu onye uwe ojii akwusila iji kamera ndị mmadụ yi n’ahụ n’ebe ụfọdụ, ha nyere ihe ngọpụ maka imebi ihe nzuzo ha. Officersfọdụ ndị uwe ojii ndị ọzọ kwuru na igwefoto ndị ahụ yi n'ahụ nwere mmetụta ọjọọ na nchekwa nke ndị ọrụ uwe.
Ndị uwe ojii n'ozuzu ha nwere echiche n'uche na ebumnuche igwefoto ahụ yi ya bụ iji tinye onye uwe ojii nsogbu. N’akụkụ nke mkpa ndị uwe ojii, ndị uwe ojii kwenyere na ihe ha chọrọ bụ; ndị uwe ojii ndị ọzọ, ụgbọ ala nchebe ọhụrụ na redio ọhụrụ. O doro anya na ha enweghị mmasị, n'anya ha, ọ bụghị igwefoto ahụ yire ahụ ga-ebelata mpụ. N'ebe ụfọdụ ebe kamera ahụ na-emegide nke ukwuu, ngalaba ndị uwe ojii na-enye ego maka ndị na-eyi kamera ahụ. Areasfọdụ mpaghara ndị ọzọ dị ka NYC ahụla nke a ma dịkwa nso ịme ya.
N'agbanyeghị nchegbu ndị uwe ojii n'ozuzu ha banyere iji teknụzụ a na-eyi n'ahụ, a hụla na ụmụ amaala na-eme mkpesa agbadatala nke ukwuu. O melatakwala ka ndị uwe ojii jiri ike eme ihe mgbe ha na-ekpe ikpe. Ọ bụ ezie na e nweela ikpe nke ndị ọma, ndị ọjọọ na ndị jọrọ njọ; niile referencing mmetụta na ahu na-eyi ese foto nwere. Enweela ịkọ nkọ na mgbanwe na nsonaazụ bụ mmetụta nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ịnakwere igwefoto ahụ na nrube isi ha na atumatu ojiji. Na mpaghara Phoenix, ndị nchọpụta chọpụtara na ndị uwe ojii na-etinye naanị ese foto ha na 30% nke oge ha chọrọ iji rụọ ọrụ ya. Na Anaheim (CA) ndị nyocha gosipụtara obere ojiji nke eserese ndị ahụ na-eyi, mana nnabata dị oke mkpa na atumatu na-eduzi ojiji ya. Enwekwara ike na mgbe afọ mbụ nke mmejuputara, ọnụego dị elu nke 85% arụ ọrụ, ebe ọ na-agbadata na 65%. Ọ bụ ezie na nke a na-eme ụfọdụ ebe, ekwesiri ịmara na ngalaba ndị uwe ojii New Orleans jigidere ọnụọgụ igwefoto dị elu nke 97-99%, nke a ebelatabeghị na nnabata ya. Okwesiri ighota na anya ndi gọọmentị etiti dị na New Orleans, nke a na-eme ka atumatu maka ojiji jiri nlezianya ma sie ike. Nnyocha e mere gosipụtara pasent nke ihe omume ebe ejiri igwefoto arụ ọrụ rụọ ọrụ, ha bụ:
Ọnọdụ ime ihe ike n'ime ụlọ- 47%
Ihe omume metụtara mmejọ ime ihe ike-39%
Ihe ọghọm metụtara mpụ ihe onwunwe-26.5%
Mmejọ okporo ụzọ-6.5%
Yiri igwefoto anụ ahụ na-ebelata oke mkpesa nke ukwuu, ọ na-emekwa ka nnabata iwu nke onye uwe ojii yi. Dịka anyị kwurula banyere ya na mbụ, a na-agbaso usoro iwu ụlọ ọrụ ahụ mgbe onye uwe ojii yi igwefoto anụ ahụ.
A na - enwekarị ọdịiche dị n’omume ndị uwe ojii na-eyiri kamera ndị a na-eyi n’ahụ ma e jiri ya tụnyere ndị na-eyighị. Ndị ọrụ afọ ofufo na-eyiri ese foto ahụ nwere ike irube isi na atumatu igwefoto ahụ, gbanwee omume ha ka a nabata nke ọma. A na-ahụkwa ha ka ha gosipụta omume pụrụ iche ma nwekwa ụfọdụ ịkpa agwa. N'ime nchọpụta emere na Arizona ebe n'ime ndị isi iri ise, 50 wepụtara onwe ha iyi igwefoto ahụ mgbe enyere ndị ọzọ ikike. Enwere akụkọ na ndị ọrụ ọrụ afọ ofufo bụ 25 ugboro ugboro nwere ike ịkọ na igwefoto ahụ na-enyere aka na ọrụ ha, okpukpu abụọ nwere ike ịkọwapụta, 4% nwere ike ijide onye omekome ma nwee ohere 30% nke ịrụ ọrụ Igwefoto ha dị ka ndị enyere iwu iyi ya. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na a manyere ha ime ya ka ha wee ghara ịkwanyere ya ùgwù, ha anaghịkwa eji ya eme ihe n'ụzọ ziri ezi. Nchọpụta ndị a dị oke mkpa emeela ka ọ pụta ìhè ịghọta nguzogide ndị ọrụ ahụ na igwefoto ahụ, ọ na-enyekwa aka ịghọta akụkụ ha na-atụgharị uche na ya. Enwekwara nkọwa doro anya nke atumatu na mmetụta nke igwe esere na ahụ na omume ndị uwe ojii.
Researchfọdụ nyocha egosila na ọtụtụ ndị ọrụ echeghị na igwefoto ahụ na-eyi n’ahụ ga-enwe mmetụta ọjọọ n’ọrụ ha. Ha mechara kwado nkwado nke nkuchi ya. Goetschel na pera na 2017 nyochara ihe dị iche na omume dị n'etiti ndị ọrụ Pittsburg ndị nakweere iji igwefoto ahụ na-eyi, ndị ọrụ nche kwenyere na ọ ga-ebelata mkpesa nke ụmụ amaala ma weliekwa okike nke ndị uwe ojii. Banyere ndị na-anabataghị mmejuputa igwefoto ahụ, ha kwenyere na mmejuputa a ga-emebi ntụkwasị obi, n'etiti ụmụ amaala n'obodo ahụ na ndị uwe ojii. Nchọpụta a mere ka o doo anya n’ezie na ndị uwe ojii dịgasị iche n’echiche nanị n’ihi na mgbe ha na-atụle, ike na adịghị ike nke igwefoto ahụ na-eyi ahụ ga-akpọ nkwado na mmegide nke nkuchi ha.
Ihe nchoputa ndi ozo choro lere anya n’obodo gosiputara na ndi isi n’otu ebe ikpe na-anabata ihe kariri igwefoto eyi ahu ga-adi n ’ezi. Ekwenyere na ha nwere ntụkwasị obi karịa na ụlọ ọrụ ha n'iji ihe nlele site na igwefoto ahụ, nyochaa ndị ọrụ ha, na ikpezi nsogbu ụmụ amaala n'ụzọ ziri ezi.
N'ụbọchị a, igwefoto ahụ na-eyi abatala azịza maka nrụgide mpụga iji mee ka akaụntụ na ọrụ nke ike dịkwuo elu. Otutu ihe n’ozuzu metutara banyere igwefoto eyi n’otu n’aru n’oge na-adịbeghị anya. N’akuku iju nnabata ma nabata ya, a na-ahụ ya ka teknụzụ ọhụụ na-abawanye ma na-ebe a ka ọ nọrọ. Ọ bụ naanị ndị uwe ojii na-ahụ na ọ bụ ihe enyemaka nye ọrụ ha ọ bụghị na ọ bụ ihe mgbochi, ha kwesịrị itinye echiche zuru ezu banyere ụmụ amaala ahụ tụkwasịrị ha obi na kwa ole ha nwere ike ime ka ha hụ ha n'anya.
Nzuzo 5496 1 Echiche Taa